Gen, Muxyadiin Gacmeey Aniga iyo ciidan dhowr boqol ah ayaa gadoodsan – SBC
Gen, Muxyadiin Gacmeey Aniga iyo ciidan dhowr boqol ah ayaa gadoodsan
Posted by Webmaster on Juun 25, 2015 Comments
Waxa ay faah faahin ka soobaxeysaa xaalad cakiran oo maalmihii la soo dhaafay ka jirtay deegaano ku yaala gobolka Nugaal ee Puntland taas oo ku aadaneyd ciidan ka wadatirsan dowladda Puntland oo is hor fadhiya.
Taliye ku xigeenka ciidamada Police-ka Putland Muxyadiin Axmed Muuse oo maanta warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in isaga iyo ciidan kale oo badan ay ku sugan yihiin gobolka iyagoo ka gadoodsan dowladda Puntland.
Waxa uu sheegay Gen Muxyadiin in ciidanka la jooga ay yihiin kuwo aan helin mushaaharaadkoodii xaqa ay u lahaayeen, islamarkaana ay soo baneyeen goobo muhiim ah oo ay difaac kaga jireen sida Galgala iyo Tukarraq.
Wareysi uu siiyay Laanta Afka Soomaaliga ee BBC ayaa waxa uu muxyadin meesha ka saaray in gadoodkiisa ay ka dambeysay arrin siyaasadeed iyo masuuliyiin xilka laga qaaday, isagoo sheegay in arimahaasi ay yihin been abuur.
Sida uu sheegay Taliyuhu 5 bilood ka hor ayay aheyd markii xilkii uu ka hayay dowladda Puntland laga qaaday, isagoo intaas ku daray in aanu wax xil ah ka heynin Puntland hada.
Sikastaba ha ahaatee Beryihii u dabeeyay waxaa ka jiray gobolka nugaal hadal heynta arrintan ku aadan gadoodka ciidankan, iyadoo la soo sheegayo in ay jiraan ciidan kale oo Puntland ah kuwaas oo deegaanada gobolkaas ku hor fadhiya Gen Muxyadiin iyo ciidanka la gadoodsan.
Dhageyso wareysiga lala yeeshay Taliye ku xigeenkii hore ee ciidanka puntland.